fasalka warshadaha Carboxymethyl cellulose (CMC) - Shanghai Chem Honest. Co., Ltd
Sodium Carboxymethyl cellulose 【Hordhac】 Name: Sodium Carboxymethyl cellulose soo gaabiyay: CMC kelli Formula: C6H7O2 (OH) 2OCH2COONa 1.Characteristics: Sodium Carboxymethyl cellulose (CMC) waa cad yahay ama hurdi ah budada waa ur, Faylasha iyo non-toxic.It ayaa sare hygroscopicity iyo waa L. biyo si ay u sameeyaan dareere qaro weyn. Waa elektrolytka a polyanionic oo aan si cajiib leh. Waxay leedahay wanaagsan kulaylka-xasiloonida, caabiga milix iyo hantida film-sameynta. 2.Applications Waayo, CERA ...
Magaca: Sodium Carboxymethyl cellulose
Formula kelli: C6H7O2 (OH) 2OCH2COONa
Sodium Carboxymethyl cellulose ( CMC ) waa budo cad ama hurdi huruud ah oo ur ah, oo aan dhadhaminayn oo aan ahayn kiniiniyad. Waxay leedahay hygroscopicity sarreeya waxayna ku milmaysaa biyaha si ay u noqoto dareere qaro weyn. Waa elektiroonig elektaroonig ah oo aan la ruxin. Waxay leedahay xasillooni kuleyl wanaagsan, iska caabin cusbo iyo sameynta filim sameynta.
Waayo, c eramics
Waayo, Rinjiyeynta iyo khad
Waayo, dawada ilkaha
CMC sidoo kale loo isticmaali karaa daahan warqad, batari, foox kaneecada-celisa, tubaakada, dhar, alxanka korontada, coemetic.
4. Gaadiidka iyo Kaydinta
Previous: fasalka Cuntada Carboxymethyl cellulose Sodium (CMC)
: Next fasalka Industry Ethyl cellulose (EC)